IELTS ဖြေတော့မလား – MYSTERY ZILLION Blog
Posted on October 20, 2009 July 3, 2010 by daydream
IELTSက လေ့ကျင့်ဖို့အချိန်များများယူလေ အမှတ်များများရနိုင်လေပါပဲ။ တစ်ပွဲတိုးလုပ်တာ မကောင်းပါဘူး။ ကိုယ်က အင်္ဂလိပ်စာ အခြေခံသိပ်ကောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ တစ်လလောက် မေးခွန်းဟောင်းတွေကျင့်ပြီးရင် ဖြေလို့ရပါပြီ။ မြန်မာပြည်မှာ မေးခွန်းဟောင်းစာအုပ်တွေ လွယ်လွယ်ဝယ်လို့ရပါတယ်။ တစ်အုပ်ကို ၁၅၀၀လောက်ပဲ ပေးရပါတယ်။ Cambridge IELTS 4/5/6… အဲဒီဟာတွေသာကျင့်ထားရင် 6လောက်ကတော့ ပြေးမလွတ်ဘူးထင်ပါတယ်။ ရှေ့ပိုင်းကျတဲ့စာအုပ်တွေက မကြည့်တော့တာဘဲ ကောင်းပါတယ်။ ဘာလို့ဆိုတော့ မေးခွန်းပုံစံနည်းနည်းစီ ကွဲသွားလို့ပါ။
IELTSမှာ အမှတ်အများဆုံးရနိုင်တာက reading နဲ့ listeningပါ။ readingဆိုတာက အဖြေက မေးခွန်းထဲမှာ ရှိကိုရှိလို့… စာဖတ်ထားတာ အကျင့်ပါနေရင် ဖြေရတော်တော်လွယ်ပါတယ်။ readingမှာ မေးခွန်းအခုလေးဆယ်မေးပါတယ်။ စာပိုဒ်သုံးပိုဒ်ပါဖြေရပါတယ်။ စာပိုဒ်(၁)က (၂)ထက် လွယ်တယ်။ (၂)က (၃)ထက်လွယ်ပါတယ်။ readingအတွက် အချိန်တစ်နာရီရပါတယ်။ ဒီတော့ တစ်ပုဒ်ကို ပျမ်းမျှ မိနစ်နှစ်ဆယ်လောက်အချိန်ရပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ (၁)ကို ၁၅မိနစ်၊ (၂)ကို မိနစ်၂၀၊ (၃)ကို ၂၅မိနစ်အချိန်ပေးပြီး ဖြေတဲ့နည်းပါပဲ။ အကြံပေးချင်တာက…. စာပိုဒ်ကို ပထမဆုံး အမြန်ဖတ်ပစ်လိုက်ပါ။ စာပိုဒ်ရဲ့ အကြမ်းဖျဉ်းသဘောလောက်ခြုံမိပြီဆိုရင် အဲဒီစာပိုဒ်အတွက်ပေးထားတဲ့ မေးခွန်းတွေကို သွားဖတ်ပါ။ မေးထားတဲ့ အဓိကအချက်တွေကို မျဉ်းသားပါ။ ပြီးရင် စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်ချင်းဆီမှာ အဖြေလိုက်ရှာပါ။ ဒါအမြန်ဆုံးနည်းလမ်းပါပဲ။ တကယ့် IELTSစာမေးပွဲမှာ စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်လုံး စိမ်ပြေနပြေဖတ်နေဖို့ အချိန်မရပါဘူး။
listeningကတော့ သူ့မေးခွန်းဟောင်းထဲက အခွေကို နားထောင်ရုံတင်မကဘဲ အနည်းဆုံး တစ်ပတ်ကို အင်္ဂလိပ်ကား သုံးကားလောက်ကြည့်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါဆိုlisteningတော်တော်ကြီး တက်လာပါလိမ့်မယ်။ speakingအတွက်ကတော့.. သူ့မေးခွန်းဟောင်းတွေကိုလည်း လေ့ကျင့်ပါ။ ပြီးရင် အဲဒီစာအုပ်တွေရဲ့ နောက်ဆုံးစာမျက်နှာတွေမှာ အခွေထဲက အသံတွေကို ပြန်ရေးပြထားတဲ့ စာတွေရှိပါတယ်။ အဲဒီစာတွေကို ကြည့်ရင်း အခွေဖွင့်ထားပါ။ သူက တစ်ကြောင်းပြောပြီးရင် ခဏရပ်ထား၊ ကိုယ်က သူ့လေယူလေသိမ်း၊ သူ့အသံထွက်အတိုင်း အဲဒီတစ်ကြောင်းကို ပြောကြည့်ပါ။ ပြီးရင် နောက်တစ်ကြာင်းနားထောင်၊ ရပ်၊ ပြော။ တစ်ပုဒ်လုံးဆုံးသွားရင် နောက်တစ်ခေါက်နားထောင်ပြီး လိုက်ပြောဦး။ တတိယအကြိမ်ကျရင်တော့ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း တစ်ပုဒ်လုံး အသံထွက်မှန်အောင် ကြိုးစားပြီး ပြောကြည့်ပါ။ ကိုယ့်အတွက်ခက်တယ်ထင်ရတဲ့ နေရာတွေ ပြန်နားထောင်ပြီး ပြန်ပြော..။ အဲလိုနည်းနဲ့ကျင့်သွားရင် ကိုယ့်ဟာကိုယ်အံ့သြလောက်အောင်ကို အပြောစွမ်းရည်တက်လာပါလိမ့်မယ်။ listeningမှာ အခန်းလေးခန်းခွဲမေးပါတယ်။ မေးခွန်းအရေအတွက်ကတော့ အခုလေးဆယ်ပါပဲ။ သူလည်းပဲ နောက်ဆုံးအခန်းက အခက်ဆုံးပါပဲ။ အခန်း(၁)မှာ လူနှစ်ယောက်အမေးအဖြေလုပ်တာလေး ဖွင့်ပြပါတယ်။ ပြီးရင် ကွက်လပ်လေးတွေ ဖြည့်ရပါတယ်။ တော်တော်လွယ်ပါတယ်။ ပုံမှန်ကတော့ သင်တန်းတို့၊ ခရီးတို့၊ ဟိုတယ်တို့ အကြောင်းစုံစမ်းတဲ့ ဖုန်းအမေးအဖြေတွေ များပါတယ်။ အခန်း(၂)မှာကလည်း လူနှစ်ယောက် ပုံစံတစ်ခုခုဖြည့်တာကို အမေးအဖြေလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖွင့်ပြပြီး ကိုယ်က အဲဒီပုံစံကို ဖြည့်ပေးရပါတယ်။ အခန်း(၃)ကျတော့ ကထိကတစ်ယောက်နဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ် နှစ်ယောက်နဲ့ ကျောင်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အိမ်စာတို့၊ စာတမ်းတို့အကြောင်းပြောကြတာကို ဖြေရပါတယ်။ နောက်ဆုံးနဲ့ အခက်ဆုံး အခန်းလေးကတော့ လူတစ်ယောက်တည်းက အကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းကို ဆက်တိုက်ပြောသွားတာပါ။ တော်တော်မြန်ပါတယ်။ အဲဒါကို ကိုယ်က မီအောင်လိုက်ဖြည့်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။
writingကို မြန်မာတော်တော်များများ မကြိုက်ကြပါဘူး။ ဘာလို့ဆိုတော့သူက ရိုးရိုးရေးရုံတင်မကဘဲ ကိုယ့်အတွေးကို ပေါ်အောင်ရေးပေးရလို့ပါပဲ။ writingမှာက နှစ်ပုဒ်ရေးရပါတယ်။ ပထမတစ်ပုဒ်က အချက်အလက်တစ်ခုခုကိုပြတဲ့ ဇယားတစ်မျိုး ဒါမှမဟုတ် နှစ်မျိုးကို ပေးထားပါတယ်။ ဥပမာ- အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ ၂၀၀၈ခုနှစ်က လျှပ်စစ်သုံးစွဲတဲ့ပမာဏ၊ အမေရိကန်က ဆင်းရဲတဲ့လူအချိုးအစား….။ ကိုယ်က အဲဒီဇယားပုံစံတွေထဲက အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကို အနည်းဆုံး စာလုံး၁၅၀ရေးပေးရပါတယ်။ နှစ်ခုရှိရင်လည်း နှစ်ခုကို ယှဉ်ပြီး ရေးပေးရပါတယ်။ တစ်ခုတည်းရှိရင်လည်း အဲဒီဇယားထဲက အချက်တွေကိုပဲ အချင်းချင်းယှဉ်ပြီး ရေးကိုရေးပေးရပါမယ်။ ဒီတိုင်းပဲ သူ့အချက်အလက်တွေကို စာကြောင်းဖြစ်အောင် ပြန်ရေးရုံနဲ့တော့ အမှတ်ကောင်းကောင်းမရနိုင်ပါဘူး။ မေးခွန်းမှာကို summarise the main facts………. and compare where relevantလို့ပါလို့ပါ။ ခုနောက်ပိုင်းတော့ ဇယားတင်မဟုတ်တော့ဘဲ ကုန်ထုတ်လုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို ပုံရိုးရိုးလေးဆွဲပြပြီး မေးတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ ဥပမာ… ပုလင်းအဟောင်းတွေကို ပြန်သန့်စင်ပုံ အဆင့်ဆင့်၊ ပိုးထည်ထုတ်ပုံအဆင့်ဆင့်.တွေကို ပုံဆွဲပြထားတာမျိုးပါ။ ပထမအပုဒ်အတွက် အချိန်မိနစ်နှစ်ဆယ်ရပါတယ်။ ဒုတိယတစ်ပုဒ်က နည်းနည်းပိုခက်ပြီးတော့ အမှတ်လည်း ပထမအပုဒ်ထက်ပိုရပါတယ်။ သူက အကြောင်းအရာတစ်ခုခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အဆို၀ါကျတစ်ကြောင်းပေးထားပါတယ်။ ပြီးရင် ကိုယ်ကဘယ်အတိုင်းအတာထိ အဲဒါကိုသဘောတူလဲ။ ဘာလို့လဲ။ သဘောမတူရင်လည်း ဘာလို့လဲဆိုတာတွေကို အကြောင်းပြချက်တွေ၊ ဥပမာတွေ၊ ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ရေးပေးရတာပါ။ သူကစာလုံး၂၅၀အနည်းဆုံးရေးရပါတယ်။ နည်းနည်းခက်ပေမဲ့လည်း မေးခွန်းဟောင်းတွေများများရေးကျင့်ထားရင် အဆင်ပြေမှာပါ။ ဒီအပုဒ်အတွက်တော့ မိနစ်လေးဆယ်အချိန်ရပါတယ်။ writingအတွက် စုစုပေါင်းအချိန်က တစ်နာရီအတိပါ။
speakingကသိပ်မခက်ပါဘူး။ သူ့မှာလည်း အပိုင်းသုံးပိုင်း ပါပါတယ်။ အပိုင်းတစ်မှာက ဒီတိုင်းအလ္လာပသလ္လာပလောက်ပဲပြောတာပါ။ “နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ”၊ “ကျောင်းသားလား”၊ “အလုပ်လုပ်နေတာလား”၊ “ဘာအရောင်ကြိုက်လဲ”၊ “ဘာပန်းကြိုက်လဲ”၊ “ဘာအားကစားလုပ်ဖူးလဲ” အဲဒါမျိုးတွေပဲ မေးတာပါ။ အရှင်းဆုံးပြောရရင် ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ အကြောင်းတွေချည်းပါပဲ။ သုံးလေးမိနစ်လောက်မေးပါတယ်။ မေးခွန်းက ခြောက်ခုလောက်မေးတတ်ပါတယ်။ အပိုင်းနှစ်မှာကျတော့ စာရွက်တစ်ရွက်ပေးပါတယ်။ အဲဒီစာရွက်မှာ ကိုယ်ပြောရမယ့် ခေါင်းစဉ်တစ်ခုပါပါတယ်။ ဥပမာ-“ကိုယ်လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အားကစား”၊ “ကိုယ့်ဘဝရဲ့အရေးအကြီးဆုံး အပြောင်းအလဲ”၊ “ကိုယ်လေးစားရတဲ့ ဆွေမျိုးတစ်ယောက်”..။ အဲဒါမျိုးတွေ မေးပါတယ်။ သူပေးထားကတည်းက ဘာတွေထည့်ပြောရမယ်ဆိုတာလည်း ရေးပေးထားပါတယ်။ ဥပမာ-“ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ရာသီဥတု”ဆိုရင်.. ဘယ်လိုရာသီဥတုလဲ၊ ဘယ်နိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ဟာမျိုးလဲ၊ ဘာလို့ကြိုက်တာလဲ ဆိုတာတွေ ထည့်ကိုပြောရပါတယ်။ မဟုတ်ရင် အမှတ်မရပါဘူး။ တစ်ယောက်တည်းတစ်မိနစ်ကနေ နှစ်မိနစ်ထိပြောရပါတယ်။ အချိန်ပြည့်သွားရင် သူကပြည့်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါ ကိုယ်မပြီးသေးရင် စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ သူမေးတဲ့အချက်အကုန်ပြောပြီးလို့ ကိုယ်ကမပြီးသေးတာဆိုရင် ကျွမ်းကျင်မှုအတွက် အမှတ်တောင်ပိုရနိုင်ပါတယ်။ မေးခွန်းမှာ ရေးပေးထားတဲ့အချက်တွေ အကုန်ပါဖို့တော့ လိုပါတယ်။ နောက်ဆုံးအပိုင်းသုံးမှာတော့ အပိုင်းနှစ်က ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဆိုင်တာမျိုးတွေမေးပါတယ်။ အဲဒီမှာ ယေဘုယျနဲ့အသေးစိတ်နှစ်မျိုးခွဲထားပါတယ်။ အဲဒီမေးခွန်းတွေက နည်းနည်းခက်ပါတယ်။ ခက်တယ်ဆိုတာက စဉ်းစားပြီးဖြေရတာမျိုးတွေပါလာလို့ပါ။ ကိုယ်စဉ်းစားမိတာကို အင်္ဂလိပ်စာလုံးဖြစ်အောင် မြန်မြန်ပြောင်းပြီး သွက်သွက်ထုတ်ပြောတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ အပိုင်းနှစ်နဲ့ အဲဒီမေးခွန်းတွေဘယ်လိုဆိုင်လဲဆိုတာ ဥပမာပြရရင်…. အပိုင်းနှစ်မှာ “ကိုယ့်ဘဝရဲ့အပြောင်းအလဲ”ကို မေးထားတယ်ဆိုပါစို့။ အဲဒါဆို အပိုင်းသုံးမှာ မေးတတ်တာတွေက “မင်းကိုယ်တိုင်ရော လွန်ခဲတဲ့ငါးနှစ်နဲ့စာရင် ဘာတွေပြောင်းလဲသွားလဲ” “နောက်အနှစ်တစ်ရာအတွင်းမှာ ကမ္ဘာကြီးက ဘာတွေပြောင်းလဲသွားနိုင်လဲ”ဒါတွေကသေးစိတ်မေးခွန်းဖြစ်ပြီးတော့ ယေဘုယျအနေနဲ့ကျ “အပြောင်းအလဲဆိုတာ လူတစ်ယောက်အတွက် ဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲ”၊ “တချို့လူတွေက ဘာလို့ အပြောင်းအလဲကို မကြိုက်ကြတာလဲ”.. ဆိုတာမျိုးတွေမေးပါတယ်။ လေးခုလောက်မေးပါတယ်။ speakingကအားလုံးပေါင်း ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်ကြာတတ်ပါတယ်။
ကျွန်မအရေးအသားမရှင်းလို့ သဘောမပေါက်လိုက်တာမျိုးရှိရင် ပြန်မေးပါ။ အတတ်နိုင်ဆုံး သေသေချာချာထပ်ရှင်းပြပေးပါ့မယ်။
CategoriesIELTS TagsEnglish, IELTS, Knowledge, Language
7 Replies to “IELTS ဖြေတော့မလား”
လေ့လာသင့်တဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ဖြစ် အီးဘုတ်ဖြစ်ဖြစ် အကြံပေးပါလားအစ်မ
ကျွန်တော်က အစ ပဲ ရှိသေးတော့ မေးခွန်းဟောင်းကိုင်တာကို အဆင်မပြေချင်လို့ပါ
ပို့အတွက် တကယ်ကျေးဇူးပါ
ဘယ်တော့လောက် ဖြေဖို့ စဉ်းစားထားလဲမသိဘူး။ အချိန်ယူဦးမယ်ဆိုရင်တော့ grammar ရယ် reading ရယ်ကို သပ်သပ်လုပ်ရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။ reading ကတော့ တွေ့သမျှ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်သာလျှောက်ဖတ်…. 🙂
ဒါကအမှတ်တွက်တဲ့ ဆိုက် http://www.canadavisa.com/ielts/free-practice-tes…
ဒီမှာက တစ်ခုချင်းစီကို ဘယ်လိုဖြေရမယ်၊ ဘယ်လိုစဉ်းစားရမယ်ဆိုတာ ပြောထားတဲ့ဟာ http://www.ielts-exam.net/index.php?option=com_fr…
ဒါက ကိုယ့်အင်္ဂလိပ်စာအခြေအနေသိဖို့ ဖြေကြည့်လို့ရတဲ့ဟာပါ။ ieltsနဲ့ ဆိုင်တဲ့ဟာတွေလည်း ရှိတယ် http://www.examenglish.com/leveltest/index.php
ဒီမှာက grammar လေ့ကျင့်ခန်းတွေပါ။ http://www.ielts-worldwide.com/free-study-materia…
စာအုပ်နာမည်တွေက အတိအကျမသိတော့ မပြောပြတတ်တော့ဘူး။ ဒီဆိုက်လေးတွေကြည့်ပြီး စာမျက်နှာအလိုက်သိမ်းပြီး ဖတ်ပေါ့နော်။
Thanks daydream. Your links are so suitable for preparing IELTS examination.
Cambridge IELTS 3/4/5/6/7
IELTS Test Builder 1/2
IELTS Practice Plus 1 & 2
Improve Your IELST Series
(သူက reading skill, writing skill, listening & speaking skill ဆိုပြီး ၃ အုပ် ရှိပါတယ်…၃အုပ်လုံး အသုံးဝင်ပါတယ်)
အဲဒီ့ စာအုပ်တွေ ထဲမှာ လေ့ကျင့်ဖို ့မေးခွန်းဟောင်းတွေ အဖြေတွေနဲ ့မေးခွန်းကို နားလည်အောင် ဖတ်နည်းတွေ၊ အဖြေတွေကို ဘယ်လို ရှာရမယ်ဆိုတဲ့ နည်းတွေ ပါပါတယ်…တော်တော် အသုံးဝင်တဲ့ စာအုပ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်….
နောက်ထပ် IELTS Common Mistakes, Rules for IELTS ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးတွေကလည်း တော်တော် ကောင်းပါတယ်…
ကျွန်တော် ဖြေတုန်းကလည်း အဲဒီ့စာအုပ်တွေပဲ ကြည့်တာပါ….အမှတ်ကောင်းကောင်းရခဲ့ပါတယ်…
နောက်တခု ပြောချင်တာ writing နဲ့speaking မှာ ကိုယ့်အယူအဆ(own opinion)ပါအောင် ဖြေနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ…
writing မှာ မေးခွန်းက နည်းပညာတိုးတက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ကောင်းကျိုးနဲ ့ဆိုးကျိုး(advantages & disadvantages)ကို ဖြေပါလို ့မေးတယ်ဆိုပါဆို ့…တော်တော်များများက ကောင်းကျိုးနဲ ့ဆိုးကျိုးကိုပဲ အဓိကထား ဖြေတတ်ကြတယ်…မှားလားဆိုတော့ မမှားပါဘူး…ဒါပေမယ့် အမှတ်က အလွန်ဆုံး band 6.5 ထက်ပို မရပါဘူး…ဆိုလိုချင်တာက သူ ့မေးခွန်းထဲက အတိုင်းပဲ ကောင်းကျိုးကို စာပိုဒ်၊ ဆိုးကျိုးကို စာပုဒ်၊ နောက်ကိုယ့်အမြင် ကိုယ့်အယူအဆ(ဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့လေ)ကို စာပုဒ် ဖြေနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ…ကိုယ့်အမြင် ကိုယ့်အယူအဆဆိုတာကလည်း အပေါ်က ဖြေထားတဲ့ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးမဟုတ်တဲ့ အချက်အလက် အသစ်ကို ဆိုလိုတာပါ…အပေါ်က ဖြေပြီးသားကိုပဲ ပြန်ရေးရင် ဘာမှ မထူးဆန်းသလို…အမှတ်လည်း ပိုရမှာ မဟုတ်ပါဘူ…
နောက် speaking မှာဆိုလည်း part 1 က Personal Questions ပဲ ဆိုပြီး တိုတိုတုတ်တုတ် ဖြေရင်လည်း အမှတ်များများ မရပါဘူး…
ဥပမာ…Are youastudent? လို ့မေးရင် Yes/No ပဲ ဖြေလို ့မရပါဘူး…နည်းနည်းကွန် ့ပြီး ဖြေပေးရပါတယ်…ဥပမာ…Yes, I am. I am now attending at XXX University specializing in XXX Major. But I intend to be employed inacompany after I graduate. (OR) No, I am not. At the moment, I have been employed asaXXX in XXX Co., Ltd. But I am graduated from XXX University specializing in XXX Major. If I gotachance, I will study abroad in the next year…ဆိုတာ မျိုးတာ…မေးခွန်းကို တုံးတိကြီး ဖြေတာထက် ကွန် ့ကွန် ့ညွန် ့ညွန် ့ဖြေတာက အမှတ်ပို ရနိုင်ပါတယ်…ဒါပေမယ့် ဖြေတဲ့အဖြေကလည်း မေးခွန်းနဲ ့ဆက်စပ်တဲ့ အဖြေမျိုးပဲ ဖြစ်ရမယ်လေ…ကျောင်းသားလားလို ့မေးတာကို အိမ်ကလူတွေ အကြောင်းလျှောက်ပြောလို ့မရပါဘူး…
နောက် speaking part3မှာလည်း ကိုယ့်အယူအဆကို ထည့်ပြောပါ…ဥပမာ…Do you think women are better worker than men? ဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုးကို ဖြေမယ်ဆိုရင် လူတချို ့ကတော့ အမျိုးသမီးတွေက တော်တယ်လို့ပြောကြတယ်… ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ…ဘာတွေမှာ…တခြားလူတွေကတော့ အမျိုးသားတွေက ပိုတော်ကြတယ်…ဘာလို ့လဲဆိုတော့….ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ အမျိုးသားတွေက ပိုတော်ကြတယ်…ဆိုပြီး ကိုယ့်အယူအဆကို ၂ ချက် ၃ ချက်လောက် ပါအောင် ထည့်ပြောရင် အနဲဆုံး band6နဲ ့အထက်ရနိုင်ပါတယ်…
Brother Saturn !!
I am one of the members of Mysteryzillion website. I would like to share IELTS ebook that i have in order to use in MZedu for learners but i don’t know how to do !
please tell meaway !
may be i will send to you by email
please give me your mail, and then i will send to you
hope to be ok soon
you can register with facebook account and you write and share.
Hay brothers and sisters, If u r going to sit the exam. Let me give u some suggestions with my experiences.
At Listening, remember to concentrate. I miss some at the listening because I was thinking something else.
Time management is important at Reading and Writing. Reading is usually come with unfamiliar topics. So practice is the best.
At writing, don’t use simple English. Try to use better words. It is the testing of grammar and vocabulary.
For the Speaking (oral) test, most are OK. Just remember to stay with the topic.
For studying, I just bought 1 DVD.(IELTS sample questions for 2010) and it is enough. Many sample questions include in the DVD and Cambridge IELTS is the best and enough.
Previous PostPrevious ခက်သလားဟေ့ Data Base – အပိုင်း ၁
Next PostNext Japanese Basic 2(အသံပေါင်းခြင်း)